Kwasukasukela, inganekwane lapho zihlukana ngokoqobo kwakuseyimpi nzima, isibhakabhaka olwandle, futhi onkulunkulu wahlala eduze abantu, u-Aphrodite wathandana Adonis, enhle kangangokuthi wakhohlwa mayelana Olympus futhi ngazihlanganisa neqembu nalabo ebathandayo emasimini zikanokusho saseKhupro. Basinda ngu abazingela izilwane futhi ubutha izithelo, ngokuzama ukuba singabonisi ukuhamba, ngisho okwesikhashana. Kodwa, njengoba kwenzeka, injabulo yabo ayizange ungunaphakade.
Adonis ukuzingela, owabulawa eyangaba a izingulube sika. Lapho bezwa lokhu, unkulunkulukazi waya ezintabeni siyofuna isidumbu sakhe. Emaweni emizileni entabeni, ligcwele ameva amatshe abukhali, Aphrodite amanxeba siqu sasingakaze siphawule egazi kanye eniselwa ngenkasa. Ukuthola Adonis, yena wayala ukuba igazi isibe anemones ozithandayo. Ngemva kwalokho, amathonsi unkulunkulukazi igazi waqala langa izimbali zasendle pink rose.
Kuze kube namuhla, zonke iziphethu, roses anemones kule ehlathini eziqhakaza ngesikhathi esifanayo, ukuhlangana njalo. Yiqiniso, lokhu kuphela yetinsita, kodwa uke ubone yini ukuthi lapho ebona njengembali yezimila zasendle rose, umamatheke futhi yahluleka ukumelana isisa isandla aphume ndawo?
Rosehip - a shrub zasendle, ubhuti ijwayelekile rose eziningi engadini. Kungatholakala kubhalwe kuphi - eqeleni onqenqemeni ehlathini phezu lomfula epaki, kanye sibukela. Lesi simila kalula ukwazi ukufunda kanye nomntwana, ngenkathi imithi yendabuko asetshenziswa cishe kuzo zonke izindawo zawo - izithelo, imbali zasendle rose, izimpande kanye namahlamvu. Abelapha abaningi, siqiniseka ngokugcwele sezindawo asemakhambini, kuhlanganiswe nemali ekhokhelwa zayo eziningi zokwelapha.
Rosehip iyona irekhodi izakhi eziningi. Sici Its main Yebo, kuthathwa khona lika-vitamin C izithelo izikhathi mkhulu kuka-50 ukusebenza lemon. Ngaphezu kwalokho, uqukethe amavithamini B2, B1, E, i-K, B6, ushukela, bioflavonoids, acid organic, pectins, yensimbi nosawoti, tannins, i-phosphorus, manganese, i-calcium, magnesium. Ngaphezu kwalokho, inja wasukuma has anamandla amagciwane izakhiwo fitontsidnymi.
Kufanele kuqashelwe ukuthi Vitamin C okumunyethwe kuwo, kunciphisa cholesterol okuqukethwe igazi, ngakho-ke, kuvimbela zingcwecwe atherosclerotic. I-carotene ne kwandisa ukumelana wonke umzimba. Vitamin P kuqinisa capillary, kanye ukumuncwa kangcono Vitamin C B amavithamini kukhona ebalulekile ekukhiqizweni purple ezibukwayo. Ngaphezu kwalokho, ahlela izinto ukusebenza kwezitho igazi-ukwakha. Futhi uzinake ukuthi vitamin K kuyadingeka uma kwenzeka opha, njengoba ithuthukisa ekunqandeni ukopha.
Iwusizo izidakamizwa rose okhalweni?
Isiraphu, akhiphe tincture rose okhalweni, ukusetshenziswa okuyinto evame kakhulu wendabuko imithi, eliphumelelayo idiphtheria, i-pneumonia, ukukhwehlela whooping, scarlet fever. Akubalulekile ukuba sicabangele amalungiselelo esekelwe lesi sitshalo lapho izifo ezibucayi ezifana ikhambi kuphela, kodwa ukuzisebenzisa kanye imithi eyisisekelo, ungakwazi asheshise kwesikhathi yokutakula.
Kuphindwe eside kubonakala izinzuzo ngokusetshenziswa kwayo kuyi izilonda trophic, kancane-ephulukisa amanxeba, amatshe e-isibindi kanye nezinso, kolwelwesi, ukopha kwegazi, nokusetshenziswa iziyaluyalu umzimba.
Ukusetshenziswa rose emazweni ahlukahlukene
Ezweni lethu, i-ukumnika of rose okhalweni, izinzuzo kanye efanele ibe kuhlu lokuhlukumezeka zazo zichazwe ngokuningiliziwe kulesi sihloko, is ngokwesiko ukwenziwa ebusika, njengoba kuphawuliwe, ukuthi basinde abandayo ngaphandle imikhuhlane.
Tibet izithelo zawo aphathe isifo sokuqina kwemithambo yegazi, neurasthenia kanye nesifo sofuba.
imithi waseChina kuwumkhuba izimpande zalesi sihlahla, lapho kuyadingeka ukuze uqinise ukugaya, kanye balahle worm.
ESiberia, zokupheka esetshenziswa ephulukisa amacembe rose okhalweni, abiliswe uju, Erysipelas ukhunta ezinyaweni zakhe.
Ukumnika rose okhalweni
Ukumnika of zasendle rose (ukusetshenziswa futhi umonakalo isithelo ngenxa okuqukethwe eliphezulu izakhi asebenzayo therein) ungasetshenziswa njenge-agent ngempumelelo okwandisa izinga yokumelana imiphumela zomzimba womuntu futhi zonke izinhlobo izinhlayiya ezithathelwanayo ezibangelwa amagciwane. Ngenxa ukusetshenziswa kwalo kungenzeka ukuba sifinyelele ukusebenza imisebenzi zokuzivikela futhi uqinise amasosha omzimba. Lokhu isiphuzo ziyozuza lapho ukukhathala komzimba noma kwengqondo.
Lokhu ukumnika Ubuye kakhulu umphumela choleretic ekwelapheni cholecystitis. Ithuthukisa isifiso kujwayeleke inqubo wokugaya ukudla. Ukwemukelwa ukwakheka izidakamizwa umsebenzi sesibindi ulungisa futhi lithuthukise gallbladder yakho. Ukumnika kuqinisa izindonga capillary kakhulu futhi imithambo yegazi kanye nokuncipha kungenzeka okuvela isifo sokuqina kwemithambo yegazi. It ikuvumela ukuba sibhekane ngokuphumelelayo izifo ukuntuleka kwamavithamini, ukungezwani uphulukisa igazi.
ukuphuza enjalo ine omuhle kakhulu imiphumela isisu. Kakhulu ngenkuthalo esetshenziswa rosehips for izinso kanye esinyeni imithi yabo. isiphuzo ukusetshenziswa indlela yokubhekana ngokuphumelela nge overvoltage futhi aqede ukukhathala, ngaphezu, ukwelashwa okunjalo kungase ngandlela-thile aphansi ingcindezi izinkomba. Kukholakala ukuthi izimali ngesisekelo lesi sitshalo zinhle kakhulu nokuguga.
Lokhu ukumnika uhlanza umzimba ubuthi, ubuthi nosawoti ngokweqile. Iphinde aqede cholesterol okweqile kanye ngesivinini umzimba. Anakho izici sasivumela eqinile anti-inflammatory.
Ukumnika rose okhalweni isetshenziselwa izingane imikhuhlane. Lokhu isiphuzo kuyasiza kubantu abaphethwe isifo sikashukela, ngaphezu kwabesifazane abakhulelwe.
Manje sifunda indlela yokwenza ukumnika rose okhalweni wedwa. Kungcono ukusebenzisa izithelo fresh. Isipuni esisodwa hashaza amanzi Chop. Gcwalisa nabo ezimbili izinkomishi zamanzi abilayo, bese ubilise imizuzu 10 esitsheni uphawu.
Shiya sokunika amahora angu-24. Khona-ke kube nzima ukumnika kwaphumela ukususa izinwele ezingaphakathi amajikijolo.
Inani izidakamizwa zokwelapha
Ekhuluma izinzuzo ukumnika, kungashiwo ukuthi sihlanganisa izici ewusizo amajikijolo fresh. Kodwa kufanele sikhumbule ukuthi ngeke zidliwe kolichestvaha ngokweqile. (Namuhla unesithakazelo eziningi zezinzuzo efanele ibe kuhlu lokuhlukumezeka) ukuthatha izifundo adingekayo ukuze ekufezeni ukumnika of rose okhalweni - inyanga eyodwa. Desirably, izingoma ezifana baphuze izikhathi 3 ngosuku.
Abantu abaningi bakholelwa ukuthi imithi engamakhambi ayikwazi anobuthi. Kodwa lokhu kuyadukisa. Yiqiniso, izakhiwo ezuzisayo rosehip ukumnika e izifo eziningi, futhi njengoba i-ejenti zokuvimbela akudingi ubufakazi, basuke ihlolwe ngokuhlangenwe nakho izizukulwane eziningi kanye nesikhathi. Kodwa ngaphambi kokuthatha isinqumo sesicelo sakhe, kubalulekile ukubona onguchwepheshe, ngakho ukuthi wasiza ichaze umthamo ilungile. Kumele kukhunjulwe ukuthi imfuyo ngayinye ingaba, nensindiso, futhi ubuthi - incike umthamo ke.
Kufanele uqaphele, ngokuthatha ukumnika rose okhalweni. Ukusetshenziswa isiphuzo okunjalo futhi umonakalo odalwe inqwaba izinto ezisebenzayo ngezithako zawo. Kunezizathu eziningana lezi izinyathelo zokuphepha:
decoction Strong noma ukumnika rosehip umonakalo uyakwazi izinyo koqweqwe lwawo. Ngemva isicelo ngasinye kudinga ukuxubha amazinyo noma uxubha umlomo ngamanzi ahlanzekile.
Okuqukethwe okusezingeni eliphezulu lika-vitamin C, bangase ukuphuza ukudlala ihlaya elibi. Njengoba ascorbic acid ne izifo emathunjini (kolwelwesi ne-asidi eningi kanye isilonda duodenal nasesiswini) kuyacasula, ungakwazi ukuyithukuthelisa exacerbation lesi sifo.
Isexwayiso kumele kusetshenziswe ukwenza rose hip kwenzeka ukuthi bezilokhu zikhona ukuqubuka esikhumbeni nokuvuvukala.
Izakhiwo ezisiza ukopha, rose okhalweni ukwenza contraindicated uma kungenzeka nesenzakalo amahlule.
Izimo umsindo umxhwele. Kodwa izingozi ukusetshenziswa kwalo asisikhulu kakhulu kunalelo ezinye izitshalo zokwelapha. Kufanele uholwe umuzwa isinyathelo, kuleso simo ngeke Ungazilimazi, nifunde rosehip umusa.
Seabuckthorn. Ngilusizo izakhiwo kanye contraindications isimangaliso isitshalo
Imvubelo Brewer sika nge selenium aqaphe impilo yakho!